တညျနိုငျမယျလို့ထငျတဲ့ ကတိတှကေိုပဲပေးပါ – Shinyoon
November 14, 2020 by Shin Yoon
ကတိဆိုတာကို လှယျလှယျလေးမပေးနဲ့ စိတျခမျြးသာရငျပွီးရောဆိုပွီး ကတိတှေ လှယျလှယျပေးလိုကျတဲ့အကငျြ့ကို ဖြောကျပါ . . . ကတိ ပေးတဲ့သူကပဲ မခေ့ငျြမသှေ့ားတာလေ ကတိတှကေို တကယျကွီး ယုံမိတဲ့သူက ဖွဈမလာတဲ့အခါ ပိုပွီး နာကငျြရပါတယျ
နောကျတဈခါဆို . . . တညျနိုငျမယျလို့ထငျတဲ့ ကတိတှကေိုပဲပေးပါ ။ လုပျပေးနိုငျမယျလို့ထငျတဲ့ ကတိတှကေိုပဲ ခေါငျးငွိမျ့ပေးပါ ကတိပေးလိုကျတဲ့သူက လှယျလှယျလေး မပေ့ဈလိုကျဖို့လှယျပမေယျ့ မြှျောလငျ့တကွီး စောငျ့နတေဲ့လူတဈယောကျအတှကျ ရငျဝကို စောငျ့ကနျလိုကျသလို ဖွဈခငျြ ဖွဈနတေတျတာလေ ။
အကငျြ့တှကေို မပွငျနိုငျတဲ့အခါ ပွတျပွတျသားသားငွငျးပါ ဗီဇမှနျးသိတဲ့အခါ မဖွဈနိုငျတဲ့အကွောငျးပွောပွပါ ပွီးစလှယျ ပွီးပွီးရော ခေါငျးတှငွေိမျ့ပွီး နောကျပိုငျး ဘာမှ ဖွဈမလာတဲ့အခါ ငွငျးလိုကျတာထကျပိုပွီး နာကငျြရတဲ့အကွောငျးလေး သိစခေငျြသေးတယျ
ကိုယျကလဲ ကိုယျပါ ကတိတှေ လှယျလှယျလေး ပေးတတျမှနျး သိသိရဲ့နဲ့ ဒီတဈခါတော့ တညျကောငျးပါရဲ့ဆိုပွီး ဆကျပွီး မြှျောလငျ့နတေတျသေးတာ ဘာမှ ဆကျပွီး ဖွဈလာမှာ မဟုတျမှနျး သိသိရဲ့နဲ့ ဖွဈလာကောငျးပါရဲ့ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ဆကျပွီး ယုံကွညျကွညျ့ခငျြသေးတာ
ဒီတဈခါ နောကျဆုံးပါ ခှငျ့လှတျပါနျော စကားတှကေို သိပျကွာကွာပွောစရာမလိုပဲ လှယျလှယျလေး ပွနျပွီးလကျခံတတျတဲ့ အကငျြ့ကိုက ခကျတာ လထေဲမှာပေးတဲ့ကတိတှကေ လထေဲမှာပဲ ပြောကျသှားတတျတာ သဘာဝဆိုရငျ လှယျလှယျလေး မယုံတတျတာလဲ ကိုယျ့ရဲ့ သဘာဝဖွဈခငျြတယျ ။
နောကျတဈခါ ကတိတှေ ပေးမယျဆိုရငျ ဖွဈနိုငျမယျလို့ ထငျတဲ့ ကတိတှကေိုပဲ ပေးပါ လှယျလှယျလေး မမေ့သှားနိုငျမယျ့ ကတိတှကေိုပဲပေးပါ လူမှာကတိ မငျးမှာ သစ်စာ တဲ့ လူတဈယောကျက ကတိတှေ လှယျလှယျလေးပေးပွီး လှယျလှယျလေး မပေ့ဈလိုကျမယျဆိုရငျ ​အစကတညျးက ပေးမနပေါနဲ့
မပေ့ဈလိုကျမယျ့အတူတူ ဖွဈမလာမယျ့အတူတူ အစကတညျးက မြှျောလငျ့ခကျြတှေ မပေးဖွဈခဲ့တာပဲ ကောငျးပါတယျ ဘယျသူ့ဖကျမှ ထိခိုကျနာကငျြစရာမလိုတော့ဘူးလေ ဖွဈနိုငျရငျ ကတိတှေ လှယျလှယျလေး မပေးခဲ့တာပဲ ကောငျးပါတယျ ။ ပေးပွီးသားကတိတှဆေိုရငျ အတတျနိုငျဆုံး တညျစခေငျြပါတယျ ။ဒီလောကျပါပဲ ။
ကတိဆိုတာကို လွယ်လွယ်လေးမပေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကတိတွေ လွယ်လွယ်ပေးလိုက်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ . . . ကတိ ပေးတဲ့သူကပဲ မေ့ချင်မေ့သွားတာလေ ကတိတွေကို တကယ်ကြီး ယုံမိတဲ့သူက ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ပိုပြီး နာကျင်ရပါတယ်
နောက်တစ်ခါဆို . . . တည်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ ကတိတွေကိုပဲပေးပါ ။ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ ကတိတွေကိုပဲ ခေါင်းငြိမ့်ပေးပါ ကတိပေးလိုက်တဲ့သူက လွယ်လွယ်လေး မေ့ပစ်လိုက်ဖို့လွယ်ပေမယ့် မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် ရင်ဝကို စောင့်ကန်လိုက်သလို ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေတတ်တာလေ ။
ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ပါ ကတိတွေ လွယ်လွယ်လေး ပေးတတ်မှန်း သိသိရဲ့နဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ တည်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီး ဆက်ပြီး မျှော်လင့်နေတတ်သေးတာ ဘာမှ ဆက်ပြီး ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်မှန်း သိသိရဲ့နဲ့ ဖြစ်လာကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဆက်ပြီး ယုံကြည်ကြည့်ချင်သေးတာ
ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးပါ ခွင့်လွှတ်ပါနော် စကားတွေကို သိပ်ကြာကြာပြောစရာမလိုပဲ လွယ်လွယ်လေး ပြန်ပြီးလက်ခံတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုက ခက်တာ လေထဲမှာပေးတဲ့ကတိတွေက လေထဲမှာပဲ ပျောက်သွားတတ်တာ သဘာဝဆိုရင် လွယ်လွယ်လေး မယုံတတ်တာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ သဘာဝဖြစ်ချင်တယ် ။
နောက်တစ်ခါ ကတိတွေ ပေးမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ ကတိတွေကိုပဲ ပေးပါ လွယ်လွယ်လေး မေ့မသွားနိုင်မယ့် ကတိတွေကိုပဲပေးပါ လူမှာကတိ မင်းမှာ သစ္စာ တဲ့ လူတစ်ယောက်က ကတိတွေ လွယ်လွယ်လေးပေးပြီး လွယ်လွယ်လေး မေ့ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ​အစကတည်းက ပေးမနေပါနဲ့
မေ့ပစ်လိုက်မယ့်အတူတူ ဖြစ်မလာမယ့်အတူတူ အစကတည်းက မျှော်လင့်ချက်တွေ မပေးဖြစ်ခဲ့တာပဲ ကောင်းပါတယ် ဘယ်သူ့ဖက်မှ ထိခိုက်နာကျင်စရာမလိုတော့ဘူးလေ ဖြစ်နိုင်ရင် ကတိတွေ လွယ်လွယ်လေး မပေးခဲ့တာပဲ ကောင်းပါတယ် ။ ပေးပြီးသားကတိတွေဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး တည်စေချင်ပါတယ် ။ဒီလောက်ပါပဲ ။
တကယျတော့ အ ခငျြယောငျဆောငျလိုကျတာပါ